David Luiz oo shaaca ka qaaday arrin layaab leh ee ku saabsan sheekada xalay dhex martay isaga iyo Saalax – Gool FM
Dajiye August 25, 2019
(England) 25 Agoosto 2019. Daafaca kooxda kubadda cagta Arsenal ee David Luiz ayaa shaaca ka qaaday in wada hadal uu dhax marey weeraryahanka Liverpool ee Maxamed Salaax inta lagu gudi jiray kulankii horyaalka Premier League-ga ee xalay ka dhacay garoonka Anfield.
David Luiz ayaa sameeyay laba qalad inta ay ciyaarta socotay, taasoo sababtay in Maxamed Saalax uu labo gool ka dhaliyo, xili ciyaarta ay ku soo idlaatay 3-1 ee loogu awood sheegtay naadiga Gunners, kulankooda 3-aad ee horyaalka Premier League-ga xili ciyaareedkan.
Haddaba wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa daabacay wareysiga uu bixiyay daafaca reer Brazil ee David Luiz ciyaarta kaddib wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in goolkii 2-aad ee ku dhashay rigoorada uu ciyaarta dilay”.
David Luiz ayaa sabab u ahaa rigooradii loo dhigay kooxda Liverpool, kaddib markii uu gadaal ka jiiday maaliyada Maxamed Salaax inta dheesha ay socotay, taasoo lagama maarmaan noqotay in garsooraha uu go’aamiyo inay tahay rigoore, waxaana ugu dambeyntii gool u badalay Saalax.
“Xaaladda way ka duwan tahay haddii aan jiido maaliyad ama gacanteyda aan saaro isaga, farqi xoogan ayaa u dhexeeya, taasina way adag tahay in lagu ogaado alaada garsoorka caawisa ee VAR”.
Intaas kaddib David Luiz ayaa wuxuu ka hadlay waxa ay ku wada hadleen isaga iyo Maxamed Salaax inta ay dheesha socotay wuxuuna yiri:
“Waxaan kala hadlay Maxamed Salaax arrinta ku saabsan rigoorada, wuxuuna ii sheegay inuusan dareemin in la jiiday maaliyadiisa”.
Hadalkan ka soo yeeray Maxamed Salaax ayaa wuxuu muujinayaa inuu jiro shaki ku saabsan rigooradii xalay laga dhaliyay kooxda Gunners inta lagu gudi jiray ciyaartii ka dhacday garoonka Anfield.
“Neymar wuxuu ka mid yahay saddexda xiddig ee adduunka ugu fiican” – Ramos